चौकुनेमा बल्यो बिजुली – Sajha Bisaunee
चौकुनेमा बल्यो बिजुली
। १९ भाद्र २०७५, मंगलवार १८:०५ मा प्रकाशित
२२ किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालन
पञ्चपुरी (सुर्खेत), १८ भदौ ।
राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार नभएको पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा २२ किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएको
छ । आइतवारदेखि सञ्चालनमा आएको आयोजनाले चौकुने गाउँपालिका वडा नं. ५ रेक्चा झिलिमिली बनाएको छ ।
वि.सं. २०६९ सालदेखि सुरु गरिएको आयोजनाले पूर्णता पाएर आइतवारदेखि उत्पादन सुरु गरेको
हो । बिजुली बाल्ने वर्षौंदेखिको सपना साकार पार्न स्थानीय नागरिकले आफ्नै लगानी र विभिन्न निकायको सहयोगमा लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेका हुन् । गाउँमा बिजुली उत्पादनका लागि रेक्चाका एक सय २० घरपरिवारले १० लाख रूपैयाँ बराबरको जनश्रमदान गरेका छन् ।
त्यसबाहेक उक्त आयोजनाका लागि साविकको बिजौरा गाउँ विकास समितिले पाँच लाख ३५ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । यस्तै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट दुई लाख ९५ हजार, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट ३५ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो भने चौकुने गाउँपालिकाले १७ लाख पाँच हजार छुट्याएको थियो । यसबाहेक उपभोक्ताबाट शेयर वापत १० हजारका दरले पहिलो किस्तामा दुई लाख पाँच हजार संकलन गरिएको थियो । विभिन्न निकायबाट ८५ लाख आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको र १० लाख बराबर स्थानीय नागरिकको श्रमदान गरी जम्मा ९५ लाखको लगानीमा २२ किलोवाट विद्युत निकालिएको आयोजनाका सचिव रेशम बिसीले जानकारी दिए ।
उक्त आयोजनाबाट चौकुनेका एक सय २० घरधुरीले प्रत्यक्ष रूपमा विद्युत उपयोग गर्न सक्नेछन् । सुरुवातमा वैकल्पिक ऊर्जासँग १६ किलोवाट उत्पादनको सम्झौता भए पनि अहिले २२ किलोवाट विद्युत उत्पादन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
वि.सं. २०६९ सालदेखि नै आयोजना निर्माणको काम सुरु भए पनि भौगोलिक विकटता, सडकको पहुँच नहुनु, बजेटको अभाव, सामान भन्दा ढुवानीको मूल्य बढी जस्ता विविध समस्याका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजनाका अध्यक्ष गोपाल बिसीले जानकारी दिए । ‘ढिला हुनुको मुख्य कारण आर्थिक समस्या नै हो’ अध्यक्ष बिसीले भने, ‘साविकका गाविस र जिविसमा बजेट थोरै हुन्थ्यो, त्यही पनि राजनीतिक भागवण्डामा हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तह भएपछि आवश्यक पहल र बजेट छुट्याएपछि काम गर्न सहज भएको हो ।’ ढिलै भए पनि आयोजना सम्पन्न भइ गाउँमै बिजुली बाल्न पाइएको भन्दै उनले खुशी व्यक्त गरे ।
गाउँमै उत्पादित बिजुली बाल्न पाएपछि स्थानीय नागरिक पनि हर्षित भएका छन् । चौकुने गाउँपालिका वडा नं. ५ की
सदस्यसमेत रहेकी स्थानीय प्याउरी बुढाले स्थानीय सरकार बनेपछि गाउँमै बिजुली बाल्न पाइएको बताइन् ।
सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत थुप्रै विकासका पूर्वाधारमा पछाडि परेको चौकुनेको रेक्चामा यतिबेला भने साँझ प¥यो कि सबैका घर झिलिमिली हुन्छ । टुकी, दियालो र सोलारमा निर्भर यहाँका नागरिकले अब भने जतिबेला पनि बिजुली बत्ती बाल्न पाउने भएका छन् । गाउँमै बिजुली उत्पादन भएपछि चौकुनेको टेलिकमको टावरलाई पनि नियमित सञ्चालन हुने बनाउन पहल भइरहेको छ । टावरसम्म बिजुली पु¥याएर केही दिनभित्रैमा २४ घण्टा टावर सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
चौकुने गाउँपालिकाले पनि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले अबको दुई वर्षमा चौकुनेका हरेक घर–घरमा बिजुली पु¥याइने बताए । उनले उज्यालो चौकुने बनाउने अभियान सुरु भएको भन्दै यसै वर्षभित्र गुटुमा सोलारबाट एक सय किलोवाट र चार वटा खोलाहरूलाई अध्ययन गरी लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिने पनि जनाए । लगाम, बेतान, घाटगाउँ लगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि अध्ययन गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सहकार्य गरी गाउँपालिकाको उज्यालो चौकुने नीति अनुसार काम गर्ने शाहीको भनाइ छ ।